‘१० अर्ब हराएको सूचना जारी गरौं, पाइपाइ खोजौं’ – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ २६, सोमबार ०८:५४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्सेर राणाले कोरोना संक्रमणका नाममा दश अर्ब खर्च गरेको हिसाव खोज्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार ट्वीट गर्दै अध्यक्ष राणाले क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त, खान नपाएर जनताको बेहाल भएको अवस्थामा कसरी दश अर्ब खर्च भएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध १० अर्ब खर्च गरेको हो भने क्वारेन्टीन किन अस्तव्यस्त ? नगरपालिका, गाउँपालिकालाई खर्च धान्न किन धौधौ ? विदेशबाट फर्कनेहरू बिना परीक्षण किन घर पुगीरहेका छन् ? खान नपाएर जनता किन बेहाल छन् ? हेलो सरकार, त्यसैले १० अर्ब हराएको सूचना जारी गरौं, पाइपाइ खोजौं।’
त्यस्तै राणाले भनेका छन्, ‘सरकारको नीतिले संक्रमण बढेन, मन्त्री, प्रम, राष्ट्रपतिले यही रट लगाए। समय छँदा यस्तै आत्मप्रशंसामा रमाए । हाल संक्रमण ठाडो उकालो गतिमा छ। जनता बन्दाबन्दी तोड्दै छन्। चुनौतिको पहाड छ। कम्तिमा ओम्नी घोटालामा कारवाही गरे हुने। तर राज के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार पूर्ण अल्मलिएको छ।’
Spread the loveकाठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजले डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक उचाई वा वरियता कायम नहुने टिप्पणी गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी आइतबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुदा डा. भट्टराईलाई चौथो वरियतामा राखिएपछि सामाजिक संजालमा भएको टिप्पणीप्रति ट्वीट गर्दै अध्यक्ष थापाले यसले […]
२०७७ आश्विन ३, शनिबार ०४:२७
सैनिक मञ्च टुँडिखेलबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन LIVE
२०७७ पुष ४, शनिबार ०६:००
खुमलटारमा ओली र प्रचण्ड र वामदेव छलफलमा